KARIERAN’ANKARAOKA : Miseho masoandro ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny zanaky ny filoha | NewsMada
KARIERAN’ANKARAOKA : Miseho masoandro ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny zanaky ny filoha
Par Freenews sur 16/02/2017
Mitohy indray ny tantara any amin’ny karieran’Ankaraoka any Marotsipoy Anjozorobe amin’izao fotoana izao. Araka ny fantatra, polisy avy eo anivon’ny FIP no nidina tany an-toerana omaly nandroaka ireo olona tao ka nametraka ireo olon’ny zanaky ny filoha. Efa misy anefa ny didim-pitsarana amin’ny tsy mahazo hiverenan’ireo olona ireo ao amin’io toerana io…
Voafitaka sa namita-tena ny teo anivon’ny polisim-pirenena? Araka ny fantatra mantsy dia izy ireo no nanome alalana ny olona hidina any anaty kariera tany Ankaraoka omaly. Raha ny vaovao voaray, ilay didim-pitsarana nivoaka tamin’ny 8 febroary lasa teo no nentin’ireto olona miaraka amin’ny zanak’i Masoandro ireto niaraka tamin’ny polisy avy eo anivon’ny Force d’Intervention de la Police na ny FIP nidina any an-toerana. Raha ny voalaza dia nametraka ireo olona ireo fotsiny izy ireo dia nandeha niverina nody.
Mazava anefa ny voalaza ao anatin’io didy io laharana RC 1279/17 dia ny hoe « tsy manam-pahefana hamerina ireo olona miaraka amin’Andrianarimiadana Alphonse sy tsy manam-pahefana hanala an’i Jean Yrmand ao anaty kariera ny fitsarana ambaratonga voalohany. Didiana kosa anefa ny hanatsaharana ny fitrandrahana ataon’i Jean Yrmand ao anatin’io kariera io ». Tsy fantatra hoe aiza ho aiza ao anatin’izany no milaza fa rohasina ao an-toerana ireo olona ao, sy ny hoe mahazo miverina ao amin’ny kariera ireo olon’Andrianarimiadana Alphonse, izay miaraka amin-dRakotoarimanana Rajaonarimampianina Matthieu. Izay no mahatonga ny fanontaniana teny ambony milaza hoe mbola misy mahay mamaky teny ve ny tompon’andraikitra eo anivon’ny polisim-pirenena izay naniraka ny olona hanatanteraka io fandroahana olona ao anatin’ny kariera io?
Araka ny fantatra ihany koa, efa nisy ny fampiakarana « appel avec défense » izay efa mipetraka eo anivon’ny filoha voalohan’ny fitsarana ambony mikasika ny didy fampitsaharana ny fitrandrahana ao anatin’ny kariera izay mitondra ny laharana 148/17 tamin’ny 09 febroary lasa teo. Noho izany, tokony tsy azo tanterahina io didy io satria efa nisy ny fampiakarana saingy mbola nahasahy nidina tany an-toerana ny vaditany antsoina hoe Ramamonjisoa Rémi nanatanteraka izany. Raha ny voalaza anefa dia tsy nahasahy niakatra teny amin’ny kariera ity vaditany ity. « Mbola henjana be io raharaha io ary tsy misy azoko lazaina mihoatra izay », hoy fotsiny ny nambarany rehefa azo tamin’ny antso an-tariby omaly. Tokony ho fantatr’io vaditany io fa tsy azo atao ny manatanteraka didy misy fampiakarana raha toa ka io didim-pitsarana io no nidinany tany. Ny tsy fantatra ihany koa hatreto na hoe didim-pitsarana hafa no nentiny nandresena lahatra ny polisy na ahoana.
Satria ve Matthieu?
Mampametra-panontaniana ao anatin’ity raharaha ity ny amin’ny fahasahian’ny minisitry ny filaminam-bahoaka Anandra Norbert mbola nahasahy nandray ny lehiben’ny vaditany Maitre Andriatsima Ravelo Heriniaina omaly sy ny nilazany fa ny fanatanterahana didim-pitsana matetika no tena hisian’ny fitsaram-bahoaka. Raha toa izao anefa no zava-misy rariny raha mitroatra ny vahoaka satria nampiasaina ho hery famoretana ireo polisy nentina tany an-toerana nefa ny didim-pitsarana tsy milaza akory ny fandroahana azy ireo sy ny fiverenan’ny olona miaraka amin’ny zanak’i Masoandro ao an-toerana. Satria ve Rakotoarimanana Rajaonarimampianina Matthieu no ao ambadik’ity raharaha ity ka tsy azo lavina ny baikony? Raha ny loharanom-baovao marim-pototra mantsy dia efa nampahafantarina ny fisian’io didim-pitsarana sy io fampiakarana io ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny polisim-pirenena saingy mbola io ihany no nataony. Ny hirariana fotsiny dia enga anie ka hilaza ny polisy fa voafitaka tamin’ilay didim-pitsana nentin’ny Me Ramamonjisoa Rémi tao amin’izy ireo fa tsy izy ireo no namita-tena efa nahafantatra ilay didim-pitsarana marina saingy mbola ninia nandika izany.
Aiza no tsy hisy fitsaram-bahoaka…
Raha tahaka izao ny zava-mitranga, mampieritreritra ihany ny fanadiovan-tenan’ny minisitra Anandra Norbert milaza fa mila manadinin-tena ny polisim-pirenena sao avy amin’izy ireo no mampirongatra ny fitsaram-bahoaka misy amin’izao. Ny olona efa nahafantatra io didim-pitsarana io saingy mbola ninia nandefa ireo polisin’ny FIP ireo any an-toerana no voalohany tokony handinin-tena ao anatin’ity raharaha ity.
Ny azo antoka, nisy fifanarahana tao ambadik’izao raharaha izao (ndlr : efa manangona ny vaovao rehetra mikasika ireo karazana fifanarahana miafina ireo amin’izao fotoana izao ny mpanao gazety eto amin’ny Free News ka ho avoaka eto izany amin’ny fotoana manaraka) ary mila handraisan’ity minisitra ity fepetra izay tompon’andraikitra mbola nahasahy nandefa ireo olon’ny USI ireo tany Ankaraoka raha toa ka tsy voafitaka izy ireo.
Tsy fanatanterahana didim-pitsarana
Araka izany, azo henjehina noho ny tsy fanatanterahana didim-pitsarana i Andrianarimiadana Alphonse sy ireo olona miaraka aminy ireto, tafiditra ao anatin’izany ny zanak’i Masoandro satria misy amin’ireo olona lasa nandeha any no mitononona ho solon-tenany. Raha ny fantatra ihany koa dia misy fitoriana ho an’ireo olona ireo amin’izao fotoana izay nataona jeneraly tompon’andraikitra iray milaza fa manao fikambanan-jiolahy izy ireo. Izany rehetra izany no mbola anenjehana azy ireo ka andrasana ny fanapahan-kevitry ny tompon’andraikitra eo anivon’ny polisim-pirenena, fitsarana, zandarimariam-pirenena manoloana ity tranga ity.
Raha tsiahivina, fandroahana tsy manara-dalàna tahaka izao nataon’ireo olona miaraka amin’ny zanak’i Masoandro ireo ka nahafaty ilay zanak’Androy antsoina hoe Mandignisoa. Io tranga io izay nampihetsika ny zanak’Androy tamin’izay fotoana izay.
Ny tena mahazendana mantsy, efa hita fa manao ezaka mitady ny marina mikasika ity raharaha ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena (ndlr : amin’ireo fanadihadiana marobe mbola mandeha ao amin’izy ireo) sy ny eo anivon’ny fitsarana dia izao manao ny ataony izao indray ny polisy. Mbola mafampana araka izany ity raharaha ity ato anatin’ny andro maromaro manaraka.